Wararkii Ugu Danbeeyay Ee Heshiiska Lagu Dhameystirayo Saxiixyada Bruno Fernandes & Rodrigo Ee Barcelona Iyo Valencia | Laacib.net
Wararkii Ugu Danbeeyay Ee Heshiiska Lagu Dhameystirayo Saxiixyada Bruno Fernandes & Rodrigo Ee Barcelona Iyo Valencia
January 28, 2020 Balaleti Comments Off on Wararkii Ugu Danbeeyay Ee Heshiiska Lagu Dhameystirayo Saxiixyada Bruno Fernandes & Rodrigo Ee Barcelona Iyo Valencia
Wadahadalo xiiso leh ayaa weli ka socda Barcelona oo la doonayo in lagu dhameystiro heshiisyo ay qeyb ka yihiin Rodrigo Moreno iyo Bruno Fernandes. Si heshiiska u dhameystirmo waa in afar dhinac ay qalinka ku duugaan.
Natiijada ugu danbeysa ayaa ah in Valencia laga dhaadhiciyo inay Rodrigo u ogolaato inuu ku biiro Barcelona oo uu bedelo xiddiga dhaawacmay ee Luis Suarez, halka xiddiga khadka dhexe Fernandes uu u wareegi doono Barcelona ka hor inta uusan amaah ugu biirin Valencia. Waa xujo adag oo ay madaxda Barcelona ka shaqeynayaan haatan sidii ay u furi lahaayeen.
Wadahadalka ay Barcelona ku dooneysay Rodrigo ayaa adkaaday madaama Barcelona ay dooneyso kaliya heshiis amaah ah oo aan lagu xirin inay iibsadaan xagaaga sida ay Valencia rabto. Heshiiska ayaa ku dhawaa inuu hakad galo ilaa iyo uu soo dhexgalay wakiilka Jorge Mendes kaasoo albaabka u furay markii uu dhex keenay Fernandes.
Barcelona ayaa bartilmaameedsaneysay xiddiga Sporting Lisbon xilli ciyaareedka soo socda. Qorshaha Blaugrana waxa uu ahaa in Fernandes ay ku bedelaan xiddigaha khadka dhexe ee kooxda ka tagaya xagaaga.
Dhanka kale, Barcelona ma dooneyso inay lacag aad u badan qarashgareyso bishaan. Sporting waxay diyaar u tahay in qeyb qeyb loo siiyo lacagta Fernandes oo laga bilaabo lacag qiimo jaban. Isla waqtigaas waxay Barcelona lacag ka heleysaa heshiiska uu Carles Perez ugu wareegayo Roma si ay isagu dheelitiraan buugooda xisaabta.
Valencia ayaa ah garabka ugu danbeeya ee wax walba ay ka go’aan. Los Che diyaar ayay u yihiin inay Fernandes amaah ku qaataan taasoo u ogolaaneysa Rodrigo inuu heshiis amaah ah ugu wareego Camp Nou iyadoo aan Barca lagu xujeyneynin inay iibsadaan xagaaga.
Heshiiska ay Barcelona ka shaqeyneyso wuxuu la mid yahay kii ay labada kooxood isku dhaafsadeen Jasper Cillessen iyo Neto xagaagii la soo dhaafay, laakiin markaan waxaa qeyb ka ah ciyaaryahan aysan Barcelona weli la soo wareegin oo Bruno Fernandes ah.